Kaadiheysta Fuuqbaxa, Boorsada qabow, Boorsada biyuhu - Sibo
qaboojiye jilicsan bag Bacda biyuhu xiraan lad kaadi haysta kaadiheysta bottle dhalada isboortiga iyo kalluumeysiga
waxbadan ka ogow SIBO
Dambiisha Sibo & Shandadaha Fitings Co., Ltd. Jiniang, oo ah shirkad si buuxda u madax banaan oo ka tirsan SBS Group, oo la aasaasay 2002. Ujeeddadeenii asalka ahayd waxay ahayd inaan u noqonno xarun iibsi hal joogsi ah macaamiisha siibbada SBS. Bilowga aasaasidda, waxaan inta badan siinnaa suumanka boorsooyinka, xargaha kabaha, dharka, iyo alaabada taxanaha ah. Markii ay sii xoogeysanayeen macaamiisha iyo suuqa, sanadkii 2003 waxaan bilownay in aan horumarino oo aan soo saarno isboortiga banaanka & alaabada wakhtiga firaaqada ah kaligeen. Sida dhalooyinka biyaha iyo kaadiheysta kaadiheysta taxanaha ah. waxaan leenahay aqoon isweydaarsi u gaar ah oo aan boodh lahayn oo ah soosaar toos ah oo loogu talagalay dhalada biyaha iyo kaadiheysta fuuq si aan u siino macaamiisha xulashooyin badan iyo adeegyo kaladuwan. Wax soosaarka SBS Sibo waxay caan ku yihiin macaamiisha adduunka waxayna abuuraan iskaashi muddo dheer ah in kabadan 30well caan ku ah ereyga.
SIBO oo ah soo saaraha xirfadlaha ah ee wax soo saarka dibadda
Alaabada SIBO ayaa ku wehelisa isboorti kasta oo bannaanka ah
Sanduuqa La Dagaalanka Kalluumeysiga
SIBO Casriyeyn iyo daryeel ku saabsan kooxda ilaalinta deegaanka
Hawlaha Horumarinta Tayada Shaqaalaha SIBO
Bishii Diseembar 27th, 2020, ka dib shirkii dib-u-eegista sanadlaha ahaa, SIBO waxay abaabushay waxqabad horumarineed oo tayo leh oo loogu talagalay shaqaalaha aadka u fiican ..
Bishii Juun 25, 2021, Shirkadda SIBO waxay u qabatay tababar xirfadaha samatabbixinta degdegga ah ee khadka tooska ah dhammaan shaqaalaha. Tababarkan, shaqaalaha SIBO waxay ku barteen qaar ka mid ah xirfadaha aasaasiga ah ee samatabbixinta xaaladaha degdegga ah aragti ahaan iyagoo si wada jir ah u daawanaya fiidiyowyada. Dhinac, waa ...
Celceliska cabirka biyaha caadiga ah ee ragga caadiga ah waa qiyaastii 60%, biyaha haweenku waa 50%, biyaha cabbirka ciyaartooyda heerka sare waxay kudhowyihiin 70% (maxaa yeelay muruqyada biyaha waxay gaarayaan 75% sidoo kale biyaha baruurta waa 10% kaliya). Biyuhu waa compon-ka ugu muhiimsan ...